ब्वाइफ्रेण्ड विदेशमा हुँदा अर्कै केटा माग्न आएपछि… - Purbeli News
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०९, २०७३ समय: १९:४३:३८
– सबिता सापकोटा
मान्छे जस्तो भए पनि ‘प्रोफेसन’ र पढाइ त मनपर्दाे हुनुपर्यो नि । बिहे गर्न मन नै छैन भने किन केटो हेरेर मन भड्काउनु । अघिल्ला वर्षहरुमा यसरी नै तर्किएँ । छोरीलाई सधँै माइतीमा बसेर पुग्दैन । यस्तै भन्थे आफन्तजन । यसपालि फुपूले कुरा राखेकी रहिछिन् घरमा । केटो सोझो छ । दुःख गरेर पढेको । जाँड, रक्सी केही खाँदैन । यस्तै यस्तै । जसरी पनि बिहेपछि श्रीमानको कमाइमै बाच्नुपर्ने भए यतिका वर्षसम्म पढाएको के काम ? बिहेको लागि गतिलो, सोझो, कमाइ भएको केटालाई नै सुम्पिन खोज्छन् । विचरा ! जागिर नपाएका बेरोजगारसँग कसले बिहे गर्ने ?
–सबिता सापकोटाको ब्लगबाट